Afka Fudud ee Hal-abuurka | Hadalka Hal-abuurnimo ee Hadal-haynta | NextMapping
Cheryl Cran - Mustaqbalka Khabiirka Shaqada
Buugga Cheryl Hada
Waan ka xumahay, laakiin waxaad moodaa in biraawsarkaagu uusan taageerin fiidiyowga HTML5.
Mustaqbalka Shaqo Muftaaxa Hadalka
Cheryl Cran waa aftahan muhiim u ah aduunka oo loo magacaabay mustaqbal # 1 ee saamaynta shaqada. Macaamiisheeda waxay ku sifeeyaan inay tahay 'kan ugu fiican' bixinta duruufaha iyo xalalka mustaqbal dhaqsaha isbeddelaya oo ku saabsan qaab gudbinta khudbad xamaasad iyo is dhexgal leh
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah haweenka ugu firfircoon ereyga hal abuurka ee ku hadla, Cran wuxuu siiyaa qiimaha saxda ah hogaamiyayaasha iyo kooxaha isagoo ka caawinaya inay ka beddelaan fikirkooda qaab toosan oo ay u wadaan hal-abuurka naftooda iyo shirkadooda.
Habka Cran oo ah hal-abuurnimo, hoggaamiye iyo hal-abuurka hal-abuurka ka hadlaya waxaa ka mid ah soo uruurinta xogta dhagaystayaasha, iyo isku-dubaridka xogta muxaadarada la habeeyay iyo sidoo kale isdhexgalka waqtiga dhabta ah inta lagu gudajiro muxaadarada.
Hoos waxaa ku yaal ikhtiyaarrada khudbada ee muhiimka ah ee Cheryl ay u gudbiso macaamiisha adduunka oo dhan - nuxur kasta ayaa loo habeeyay waxayna isku dari kartaa walxaha qodob kasta si loo abuuro bandhig gaar ah dhacdadaada.
Faahfaahin dheeraad ah ee Qorshooyinka kulanka
Isbedelka Hogaaminta ee Mustaqbalka Wadajir ah - Sida loola tacaasho caqabadaha dadka ee ku wajahan Xaqiiqda WFH
Faafida ayaa dardar gelisay mustaqbalka xaqiiqada shaqada sida kordhinta shaqada ka imaanaysa shaqaalaha guryaha iyo caqabadaha horyaal ee la socda shaqada fog.
"Ujeedada Cheryl ee ku saabsan raadinta fahamka iyo raadinta heshiis guud oo ka kooban sababaha ina horyaalla, halkii ay si deg deg ah gadaal ugu riixayn lahayd iskuna dayi lahayd inay la dagaallanto arrimahaas, waxay si gaar ah qiimo iyo waqti u ahayd warshadeena."
Shirka sanadlaha ah
Ururka Bangiga Indhaha ee Ameerika
U Gudbista Waxa Ku Xiga Xaqiiqda Dhabta ah (Covid-19 Reality)
Ma jiro qof saadaaliyay in masiibo caalami ah sannadka 2020 ay kor u qaadi doonto dhammaan habka aan u shaqeyno oo u noolaanno.
"Runtii waxaan aad u jeclaa software-ka ereyga furaha hadalka isticmaalaya - malaha waa khibradda ugu fiican ee aan arkay wali (oo ugu dhow khibrad qof ahaaneed)."
Ku Hogaaminta Kooxo Virtual Meel Deg Deg Ah Is Beddaya Oo Goobaha Shaqada Ah
Sanadkii 2020 shirkaduhu waa inay si dhakhso leh u qiimeeyaan oo ay ula qabsadaan carqaladeynta weyn ee masiibada
"Kalfadhiga Cheryl wuxuu ahaa mid firfircoon oo dhiirrigelin leh.
Mustaqbalka Hada waa
Sida ay Shaqada Fog u Jirtid halkan Waa In La Joogo Iyo Waxa La Sameeyo Si Loogu Nasto Mustaqbalka
"Hagaag waxaan si daacad ah u dhihi karnaa furaha Cheryl keydkiisa wuxuu lahaan jiray kaqeyb galayaasha ugu badan ee suuragal ah waligood taariikhdeena 50 sano ee sameynta dhacdadan.
Isweydiinta qoraalka ah ee su'aalaha iyo codeynta dhagaystayaasha, dhagaystayaasha waxaa loo sameeyay inay dareemaan inay qayb ka yihiin wadahadalka - maahan wax fudud!
Qaabka muhiimka ah ee Cheryl ayaa ah mid hal abuur leh isla markaana ku dayda waxa ay kaga hadasho 'hoggaanka wadaagga'. ”
Cheryl Cran wuxuu ahaa xubin muhiim ah oo kuhadlan munaasabaddeena hogaaminta sanadlaha ah, eray ahaanna waa mid cajiib ah. Aragtida gaarka ah ee Cheryl ee mustaqbalka shaqada iyo waxa loogu baahan yahay shirkadaha inay ahaadaan kuwa ugu horreeya ayaa keenay qiimo aad u weyn kooxdeena. Waxaan kala tashanay naftayda iyo kooxda hogaaminta dhaqankayaga kala duwan iyo sida aan uxalin karno waxaan horaan usameynay Hogaamiyayaasheena waxay dhiibteen labo suul oo kusaabsan qaabka gudbinta Cheryl kaas oo xawaare deg deg ah, toos ah iyo firfircoon. Waxaay igu soo biirtay bulshadeena fiidnimo .. Waxa aan uheley qiimo aad u sariir ahaan ah agaasimaha shirkada waa sahaminta kahor dhacdada in ay kudartay qoraalkeeda muhimka ah sidookale waqtiga doorashada iyo qoraalka dhabta ah ee runtii kuqasbay kooxdeena garashada. kaliya ka hadal mustaqbalka iyo isbeddelada ay dhab ahaantii na siisay qalabyada hoggaanka isbedelka si loo abuuro heerkeenna xiga ee guusha. "
Mustaqbalka Shaqada hadda waa - diyaar ma u tahay?
Maxey u baahan yihiin hogaamiyaasha iyo kooxahoodu inay sameeyaan si ay u horumariyaan maanta iyo wixii ka dambeeya sanadka 2030?
“Cheryl waxay ahayd taam buuxda oo ku habboon shir-weynaheena mustaqbalka - waxaan haysannaa koox sifiican u fahansan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha ururrada amaahda kuwaas oo ku faanaya inay ku sii jeedaan geeska hore waxayna Cheryl ku adkeysteen inay ka fikiraan xitaa hal abuurnimo, si ay u fidiyaan qaabkooda hal-abuurka iyo sidoo kale Dhisaan tabaha mustaqbalka ku saleysan isbeddelada xawaaraha isbeddelka ee ka socda warshadaha adeegyada maaliyadeed. Waxaan si heer sare ah ugula talin lahayn Cheryl Cran mustaqbal ahaan khabiir shaqo iyo hadal muhiim ah. ”
Howlwadeennada Ku-meelgaarka ah ee Sumcadda Sumcadda MN
Sida ugu wanaagsan ee loo abuuri karo mustaqbal waa khariidad
Adiga iyo hoggaamiyeyaashaadu diyaar ma u tihiin inaad si firfircoon u hoggaamisaan mustaqbalka?
“Cheryl waxay nagala soo shaqeysay meelaheedii ugu horeeyey ee magaalada oo dhan. Baxsashadu waxay diirada saartay mowduucyada ballaaran ee hal abuurka iyo isbedelka hogaaminta. Waxaan ku casuumay ka soo qeyb galayaashii kulankayagii inay macaamiisheenna gudaha iyo dibaddaba ahaayeen hay'addeenna. Khibradda Cheryl ayaa lagu arki karaa wax kasta oo ay ka mid yihiin qorshaynta hore ee dhacdada iyo inta lagu guda jiro maalinta iyo badh ka laabashada dheer. Intii lagu guda jiray dib-u-gurashada, Cheryl waxay ku fiicneyd isku xirnaanta iyo kaalmaynta hoggaamiye kasta inuu tilmaamo mustaqbalkooda nafsadooda iyo ganacsigooda.
Magaalada Coral Gables
Kooxaha mustaqbalka u diyaarsan - sida loo abuuro isku dhacyo, laqabsanaan & kooxo hal abuur leh
Kooxahaadu miyay ku midoobeen himilo, diiradda iyo ujeedo?
Cheryl Cran ma ahan Sheryl Crow laakiin iyadu waa xiddig dhagax weyn oo aan yareynin! Waxaan u haystay Cheryl sidii xiritaankeenna gabagabada ugu ahaa af hayeenka barnaamijyada taxanaha ah ee kooxahayada hoggaanka. Cheryl ayaa nagala shaqeysay dhowr iyo toban dhacdo halkaas oo ay u dhiibtay ku dhawaad ​​hogaamiyaasha 6000 ee kooxaha u diyaarsan mustaqbalka. Awooddeeda ay ku duubto farriimaha soo-bandhigayaasha kale, kartideeda ay kula hawl gasho kooxaha si kaftan ah, madadaalo ah, xaqiiq ah iyo fikir kicin leh waxay si fudud u la yaabeen oo sifiican waxa aan ugu baahneyn meel u dhow dhacdooyinkayaga.
Jaamacadda VP AT&T
Mustaqbalka soo jiidashada & dhawrisida kartida sarsare
“Kooxdayadu waxay ku qiimeysay Cheryl 10 10 ahaan bayaankeenna muhiimka ah. Waxay ahayd af-hayeheena ugu sareeya ee lagu qiimeeyo shirkeena. Way dhaaftay wixii aan ka fileynay! ”
Madaxa suuq geynta Qaranka Agra
Farshaxanka hoggaanka isbedelka - isbeddelka wadista wadista adduunka oo xawli ku socda
Waxaan ku nool nahay waqti isbedel adiguna waxaad tahay ku-beddelasho!
“Cheryl waxay khabiir ku tahay martida shirkayaga hogaaminta sanadlaha ah - waxay ku soo bandhigtay hogaan isbedel iyo karti qoris. Heer sare waxaan helnay qaabkii Cheryl, oo ay la xiriirtay kooxda hogaaminta iyo moodellada ay soo bandhigtay si sax ah ayey ula jaanqaadeen yoolalkayaga shirweynaha. Natiijooyinka ugu dambeeya ayaa ah inay naga reebtay annaga oo doonayna inaan waxbadan ka ogaano wareegtada isbeddelka iyo inaan si dhow u eegno sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo hoggaamiyeyaasheena inay u dabacsanaadaan isla markaana ula jaan qaadaan isbedelka socda. ”
Ma ubaahantahay fure muhiim ah?
Nagala soo xiriir si aad u hesho macluumaadka ku saabsan sida ugu horreeya ee Hadalka Hal-abuurka iyo Hal-abuurka cusub, Cheryl Cran ay u habayn karto fure-u-dhigidda munaasabaddaada soo socota.